मृत्युपछिको भरोसा बन्दै आइएमई, फाँटेका मन जोड्ने नवीन जमर्को Bizshala -
मृत्युपछिको भरोसा बन्दै आइएमई, फाँटेका मन जोड्ने नवीन जमर्को
यूएई । कुरा क कसको मात्र गर्नु कोरोनाले कसैलाई छोडेको छैन । चाहे त्यो विकासोन्मुख राष्ट्र होस् या शक्तिशाली, चाहे धनी होस् या गरिब, चाहे डाक्टर होस् या त पादरी, पुजारी । सबै पीडामा छन्, सबै प्रभावित छन् । राज्यलाई भार बढेको छ । डाक्टर, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमसँगै काम बढेको छ । ठूला भनिएका व्यापार नोक्सानमा गए, सानाको त कुरै छोडौँ, कति गतिलै डुबे कति विस्थापित नै भए । निजी क्षेत्रका कत्ति जागिरेको जागिर खोसियो, त्यसको असर झुपडीहरुमा गएर रोकियो । गाँसका लागि सँघर्ष गर्नेहरु एकछाकका लागि हारगुहार गर्न लागे, केही मन हुनेले सहयोग गरे कोही सहयोगीले संयोजनकारी भूमिका खेले । समस्या विश्वव्यापी हो । कोरोनाकै कारण लकडाउन हुँदा विश्वको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । कुनै एक क्षेत्रका लागि मात्र कसैले सहानुभूति दिनसक्ने अवस्था देखिन्न ।
अहिले विश्वले विस्तारै टाउको उठाउन खोज्दैछ, तर घरीघरी त्यो उठ्न लागेको टाउकोमा घरी घरी नै कोरोनाबाट प्रहार पनि भइरहेकै छ । कोही हार मानेर पुनः लकडाउन गर्ने योजनामा छन् त कोही प्रविधि र प्रणालीको सदुपयोग गरेर संयमताका साथ कोरोनासँग लडिरहेका छन् ।
अब हाम्रै कुरा गरौँ न आफ्नो प्रिय मान्छेलाई गुमाउँदा कसलाई पो खुसी मिल्छ र ? तर सबैको एउटा चाहाना भनेको जिन्दगीको अन्तिम घडीमा आफन्तको साथ हो । तर हामी यस्तो बज्रपातमा पर्यौं किँ कि जाँदा जाँदै विदाईका हात हल्लाउन पाएनौं । सपनाको सिँगो पहाड बोकेर परिवारको खुसी किन्न प्रवास गएकै बेला पापी कोरोनाले सपनामाथि हमला गर्यो । र, सपनासँगै कसैको सिउँदो पुछियो, कसैको काख रित्तियो, कसैको माया ममता टुट्यो । त्यहाँभन्दा दुख लागेको कुरा त के भने सास छँदै त देख्न भेट्न पाएनन् परिवारले तर मृत्युवरणपछिको अन्तिम दाहसँस्कार पनि गर्न पाएनन् । उनीहरु विदेशी भूमिमै बिलाए सदासदाका लागि, हो यही दुःखमा साथ दिँदैछ आइएमईले यसपालि ।
विश्वव्यापि महामारीमा सबै सँगै हिँड्नुपर्ने समय हो यो । भन्न त भन्छ नि सरकारले पनि हामी जनताको दुःखमा सँगै छौँ भनेर, तर भनाई र गराईमा कहाँ समानता छ र ? मौका पाउनासाथ कमाईकै पछि लागेका छन् देशको नेतृत्व तहमा हुनेहरु । तर आइएमई, जो एउटा रेमिट्यान्स सहजीकरण गर्ने कम्पनी हो, उसले भन्दै छ, हामी सदा झैँ यसपालिको चाँडबाडमा खुशी बाँड्दैनौ, यो दुःखमा हामी भरोषा बन्न चाहान्छौँ ती नेपालीहरुको, जसले यो महामारीमा बिदेशी भूमिमा ज्यान गुमाए । आशाको दीयो निभेपछि छट्पटाइरहेको परिवारमा हामी थोरै भए पनि खुसी ल्याउन चाहान्छौँ भन्दैछ आइएमई ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको जग बसाल्ने कम्पनी हो आईएमई । दशैंतिहार, नयाँ वर्ष जस्ता विशेष अवसरमा आईएमई गर्ने अर्थात आईएमईबाट रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने ग्राहकलाई भाग्यशाली चिठ्ठा अन्तर्गत कहिले बम्पर पुरस्काररमा २० लाख नगद त कहिले गाडी तथा कहिले विदेशमा हुने नेपालीलाई छुट्टिमा घरजाने टिकट दिने गरेको थियो । यो एउटा सुखको अवसर हुन्थ्यो, पाउनेको लागि र बजारमा ठूलो नाम हुन्थ्यो दिनेको लागि अनि बजारीकरण पनि हुन्थ्यो आईएमईको ।
समय सँधै एकनाश रहेन । यसपालि कोरोनाले हाम्रा चाँडबाडहरु खल्लो बनाइदिएको छ । रमाउने, मनोरञ्जन गर्ने उर्जा छैन । छ त निराशा, त्रास, भय अनि कोरोनाविरुद्घ कहीँ कतै विश्वासिलो खोप आइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशामात्र । यसपालिका चाँडहरु उमंग लिएर आउँदै छैैनन् । यस्तो अबस्थामा पनि आइएमई हामी ती विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीसँगै छौँ है भनेर आफ्नो पहिचान देखाउन खोज्दैछ । कामको शिलशिलामा विदेश गएर उतै ज्यान गुमाउने नेपालीलाई भरोषाको आभाष गराउन खोज्दैछ । हिजो तपाईले हामीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनु भयो र हामी तपाईका प्रिय भयौँ, आज तपाई हुनुहुन्न र पनि हामी तपाईसँगै छौँ । तपाईको आँशु पुछ्न हामी पनि सघाउँछौँ भन्दैछ आईएमई । जो आजको ठुलो आवश्यकता हो र मानव सभ्यताकै गतिलो उदाहरण पनि ।
फाटेका मनहरुलाई जोड्ने माध्यम हो र आईएमईले आफ्नो जिम्मेवारी वास्तवमै बहन गर्न खोजेको हो भन्दा खासै अतियुक्ति नहोला ।
कुरोलाई एकै बाक्यमा भन्नुपर्दा आईएमईले आईएमई भरोषा कोष नामको कोष स्थापना गरेको छ । त्यो भरोषा कोष आईएमईको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोभिड १९ का कारण विदेशमा ज्यान गुमाउन पुगेका श्रमिकका नेपालमा रहेका परिवारका लागि हो । नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गई कोरोनाकै कारणबाट मृत्यू भएका नेपालीका परिवारलाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिनका लागि आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न लागिएको आइएमईका राजु पौडेल बताउँछन् ।
कसरी पाइन्छ भरोसा ?
आइएमई भरोसा कोषमा आवेदन आह्वान गरिसकिएको छ । जसअनुसार सन् २०२० को जनवरी १ देखि यहि अक्टोबर १६ तारिखसम्म विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका आफन्तले आईएमईको फाउन्डेसन, आइएमई भरोसा कोषमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन आइएमईको केन्द्रीय कार्यालय पानीपोखरी तथा पाँचै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यलयमा मृतकका आफन्त आफैँ गएर दिनसक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
निवेदन दिँदा मृतकको भिषा कपी, पासपोर्ट कपीका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आएको मृत्यूदर्ताको प्रमाणपत्र र मृतकसँगको नाता प्रमाणित भएको कागजात रहनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको पनि आइएमईले बताएको छ । भरोषामार्फत कति रकम दिने भन्नेबारे अहिलै विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । आवेदन कार्तिक मसान्तसम्म दिन सकिनेछ । सकेसम्म धेरै पीडितसम्म सूचना पुगोस् र वास्तविक पीडितको भरोषा बन्न सकौँ भन्ने आफूहरुको चाहाना रहेको आइएमईका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
लक्षित पीडितमा सूचना पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो । एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीले जस्तै हामी सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्यौं भने पक्कै पनि ती घाउहरुमा मल्हम लाग्नेछन् । आईएमईलाई शुभकामना हाम्रो पनि ।